अब स्काइपबाट सिधै फेसबुकमा कुरा गर्न सकिने [Call Facebook Friends From Skype]
Aakar November 21, 2011
तपाईको फेसबुकका साथीहरुको स्काइप (Skype) मा खाता (account) छैन भने पनि अब तपाईले स्काइप मार्फत सिधै आफ्ना फेसबुकका साथीहरु सँग कुरा गर्नसक्नुहुने भएको छ ।
३ दिन अघि घोषणा गरिएको यो सुविधा स्काइपको पछिल्ला भर्सनहरु (Skype 5.4 Beta for Mac र Skype 5.7 Beta for Windows) मा उपलब्ध रहेको छ । अत: स्काइपबाट फेसबुकमा भएका साथीहरु सँग सिधै कुरा गर्नको लागि, तपाईहरुले स्काइपको नयाँ भर्सन प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
स्काइपमा आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल ‘कनेक्ट’ गरेका प्रयोगकर्ताहरुले, स्काइपबाटै फेसबुकमा भिडियो कल पनि गर्न सक्नेछन् । साथै, स्काइपको ड्यासबोर्डबाट, फेसबुकमा को को साथी अनलाइन बसेका छन् भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन सकिन्छ ! साथीहरुको फेसबुक स्टाटस अपडेट पनि स्काइपबाटै हेर्न सकिन्छ ।
पुनश्च: फेसबुकका साथीहरु सँग स्काइपबाटै च्याट गर्नको लागि स्काइपको नयाँ भर्सन प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
अनिल जि, धेरै धेरै धन्यबाद नयाँ भर्सन र यसको उपयोगिताको बारेमा जानकारी गराएकोमा ।
Sanklp Pokhrel August 1, 2012 at 12:02 PM
मैले फेसबुक कनेक्ट गराएको थिएँ तर अचानक नचिनेका र एड नै नगरेका हरू स्काइपमा देखा पर्न थाले। त्यसैले त्यसलाई डिस्कनेक्ट गराएँ। के छ यसको समाधान???
फेसबुक कनेक्ट भएपछि सबै फेसबुकका साथीहरु स्काइप मा देखिएका हुन् । समाधान भनेको, सबैलाई देखाएपनि कुरा नगर्नु हो साथै कन्ट्याक्ट डिलेट वा ब्लक पनि गर्न सकिन्छ । मैले फेसबुक कनेक्ट गरेको छैन, त्यै भएर मलाई यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने पुर्ण जानकारी भने छैन है !
Kamal Sharma August 1, 2012 at 12:02 PM
skype ko option ma gayera facebook friends disable garnu..
Aakar October 31, 2017
कसैले ट्विटरमा लाइक गर्दा के बुझ्ने? ट्विटमा आउने लाइकलाई कसरी लिने? कतिपय अवस्थामा ट्विटरमा ट्विट लेखिसक्न पाएको हुन्न, 'लाइक' आइसक्छ । यसलाई एक हिसाबले ट्विटरको राम्रो र अर्को हिसाबले कामै नलाग्ने 'फिचर' भनेर मान्न सकिन्छ । यसलाई यस अर्थमा काम नलाग्ने भन्दै छु कि, कतिपय प्रयोगकर्ताहरु जो कोहीको हरेक ट्विट लाइक गर्छन्, कहिलेकाँही त उनीहरुलाई म्युट गर्नुपर्ने बाध्यता नै हुन्छ, नचाहिँदो नोटिफिकेशनका कारण । ट्विटरमा लाइक किन गरिन्छ भनेर सबैका आ-आफ्नै बुझाइ होलान्, चलाउने आफ्नै तौर-तरिका होलान् । तर यत्ति चाँहि के प्रस्ट हुनुपर्छ भने ट्विटरमा वा फेसबुकमा आउने लाइकहरु अनलाइन भोटिङमा मात्र काम लाग्छन्, यी लाइकहरुले कसैको समर्थन वा विरोध भनेर जनाउँदैन । दुई वर्ष अघिसम्म या भनौँ २०१५ सम्म ट्विटरमा पानको पात थिएन, लाइक भन्ने फिचर थिएन । यसको सट्टा तारा थियो, त्यसलाई फेवरेट भनिन्थ्यो । सन् २००६ मा ट्विटर सुरु भएसँगै फेवरेटको सुरुवात भएको थियो, जसले २०१५ सम्म निरन्तरता पायो । ट्विटरका फिचरहरु मध्ये धेरैले राम्रोसँग प्रयोग गर्न नजानेको फिचर भनेर फेवरेटलाई लिने गरेको पाइन्छ ।